कपिलवस्तु : कपिलवस्तु अस्पतालका ३१ वर्षीय कन्स’ल्ट्यान्ट फिजि’सियन डा. जाबेद खाँ कोरोना संक्र’मित छन् । उनको परिवारै सं’क्रमित छ । स्वास्थ्य ग’म्भीर भएपछि आमा आई’सीयूमा भर्ना छिन् ।
उनी भने बिहानदेखि साँझसम्म संक्र’मितको उप’चारमा ख’टिरहेका छन् । गु’लाम अलीउनलाई बिरामी जाँच गर्दागर्दै रु’घाखोकी लाग्यो । ६ दिनअघि पीसीआर प’रीक्षण गर्दा संक्र’मण देखियो । परिवारमा र अस्पतालका मे’डिकल सुप’रिन्टेन्डेन्ट डा. किशोर बञ्जाडेलाई जानकारी गराए ।
अस्पतालमा ज’नश’क्ति कम थियो । उनको क’मान्डमा को’भिडका बि’रामी उ’पचार गर्ने टि’म बनेको थियो ।
अस्पतालमा बेड नपाएर भुइँमा समेत बि’रामी छन् ।बि’रामीको छ’टपटाहट देखेर त्यसै बस्न उनको मन मानेन । घरमा बस्दा के भयो, कसो भयो, चि’न्ता लागिरहने ।
त्यसपछि सेवामै ख’टिए । अहिले उनी दिनमा १२ घण्टा उपचा’रमा ख’टिरहेका छन् ।अस्पतालले साबिक महिला विकास कार्यालयमा सञ्चालन गरेको अस्थायी को’भिड अस्पतालमा पुगेर उनी बि’रामी हेर्छन् ।
बि’रामीलाई उत्साह थप्छन् । ‘म पनि को’रोना पोजि’टिभ हो भन्छु,’ उनले भने, ‘काम गरिरहेकै छु भनेर भ’रोसा दिन्छु ।’डा. खाँ सं’क्रमित बि’रामीको उप’चार गर्दा सत’र्कता अपनाउँछन् । टाढैबाट सोधपुछ गर्छन् । सल्लाह दिन्छन् र औ’षधि लेख्छन् ।‘सँगै रहेका स्वास्थ्यक’र्मीलाई परै बस्न भन्छु,’ उनले भने, ‘स’तर्कता अ’पनाउँदै टिमसँग कुरा गर्छु ।’
संक्र’मित भएपछि पहिलेजस्तो काम गर्न सहज नहुने उनले बताए । ‘संक्र’मण अरुलाई न’सरोस् भनेर स’चेत भएर काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘आफू सं’क्रमित भएपछि धेरै कुरा जान्ने बुझ्ने मौका मिलेको छ ।’संक्र’मणबारे दिनदिनैजसो नयाँ तथ्य, अध्ययन र जानकारी आउने गरेको उनले सुनाए ।
नयाँ प्र’भावकारी सूचना र जानकारी प्रयोगमा ल्याएर बि’रामीलाई छिटो निको गर्न सहयोग भइरहेको छ । उनले पेसाप्रति सन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनका अनुसार अहिले सबै अक्सि’जन सपोर्ट चाहिने संक्रमित आउँछन् ।
खाली समयमा उनी फोनमा परामर्श दिन व्यस्त हुन्छन्, औ’षधि, उपचार सुझाउँछन् । ‘ग’म्भीर खालकालाई अस्पताल आउन भन्छु,’ उनले भने, ‘ग’म्भीर नभएकालाई घरमै आ’इसोलेट भएर बस्न भन्छु ।’ उनी उपचार गर्दागर्दै आईसीयूमा पुग्छन् ।
जहाँ उनकी ५८ वर्षीया आमालाई सोमबार भ’र्ना गरिएको छ ।संक्र’मित आमा अ’क्सिजन सपोर्टमा छिन् । उनी आमाको उपचार गर्छन् । ‘मलाई देख्दा आमाले सजिलो महसुस गर्नुहुन्छ । म पनि खुसी हुन्छु,’ उनले भने,
‘त्यसैले बेलाबेला आमानिर पुगिरहन्छु ।’ उनका ६० वर्षीय पिता, २८ वर्षीय भाइ र २६ वर्षीया बहिनी पनि संक्र’मित छन् । तीनै जना घरमा आइसो’लेसनमा छन् । उनी अस्पतालबाट बचेको समय घर पुगेर परिवारको हेरचाह गर्छन् ।कान्तिपुर दैनिक
२०७८ जेष्ठ ३, सोमबार ०१:२५ गते 1 Minute 476 Views